I-M3 ebomvu ejikeleze i-Aluminium Standoffs
Inkcazo:Amanqwanqwa ebomvu ajikelezayo,M3 Ukujikeleza okumiselweyo,Inyathelo I-Aluminium Standoffs
Home > Imveliso > I-Standoffs ezenziwe ngokwezifiso > Ukuma kweenyawo zeAluminiyam > I-M3 ebomvu ejikeleze i-Aluminium Standoffs
Umzekelo No.: HC-SA0001
Packaging: Ukupakishwa kwephepha
Indawo yokuQala: I-China (i-Mainland)
Uninzi lwama- aluminium omile ayeshushu esitokhweni, naziphi na iimfuno pls siziva sikhululekile ukunxibelelana nathi.
Ubungakanani obutshisayo M3, iswekile eshushu ejikeleze i-aluminium yema , ishushu ngombala obomvu, luhlaza, luhlaza, bampinki, bumdaka, golide, orenji, isilivere, emnyama nonyana.
I-aluminium standoffs, ubude ukusuka kwi-5mm ukuya kwi-90mm.
Isitayile seAtle esifana neAluminium Round Standoff, iAluminium Knurled Standoff, iAluminium iNyathelo elimiyo, iAluminium Hex Standoff njalo njalo yayisesitokhweni.
Ukuba kukho naziphi na iimfuno ezenziwe ngokwezifiso, kulungile kuthi, pls akukho ngxaki.
Iimveliso ze-Hobby zeekhabhoni zisebenza kwiindidi zamashishini, kubandakanya ne-drones evelayo yentsimi, amashishini erobhothi, uloliwe ophakamileyo kunye nokunye. Apha ngezantsi kukho amasimi odibene nawo okanye oza kudibana nawo, imihlaba engaphezulu ilindelwe nguwe kunye nam.
Iimveliso zakho ozithengileyo ziya kuhlolwa ngokungqongqo kwaye zipakishwe ngendlela eyoyikisayo, nokuba yeyiphi na indlela yokuhambisa oyilindeleyo, sizabalazela ukuyifumana.
Hobbycarbon CNC LIMITEDis umboneleli we-OEM okhethekileyo kwimveliso yeCarbon fiber, inkonzo yeCarbon fiber CNC, ezinye izinto zedrone kunye neemoto. Ngokonyuka kweemfuno zeshishini lokufaka uphawu, sandise ishishini lethu kwi-Aluminium CNC yokusika, ngokuzinikela ekuboneleleni ngenkonzo ebanzi kubathengi.
Kwixesha elidlulileyo, ngakumbi nangakumbi kufanelekileyo okubonakalisa uphawu kwebhasi kusekwe intsebenziswano yexesha elide kunye nathi, kwaye sinika uninzi lokuphendula okunelisekileyo.Ngoku, sinokuqiniseka ngokuzithemba ngomgangatho, sithembisa ukuba isampulu kunye naluphi na uhlolo lomgangatho zamkelekile.
Abasebenzi be-Hobby ikhabhoni bagxila kwiimfuno zabathengi kunye nokujonga imeko yentengiso enokubakho, injongo kukwanelisa abathengi ababenxibelelana nabo, nayiphi na ingxelo elungileyo kunye nomlamli okanye izimvo ziya kuphathwa kakuhle, nokuba uphi na, xa uyithumela, ufuna ntoni .
Q1.Mingaphi iminyaka kolu shishino?
A: Sikhethekileyo kulo mgca iminyaka emininzi kwaye sifumene uninzi lokufumana ingxelo eyonelisekileyo evela kumashishini okuthengisa.
I-Q2: Ndingayifumana i-odolo yesampula?
A: Ewe, siyayamkela isampula yokuvavanya kunye nokujonga umgangatho. Iisampuli ezixutyiweyo zamkelekile.
Q3: Leliphi ixesha lokukhokela?
A: Isampulu idinga iintsuku ezi-1 ukuya kwezi-1,3, iimveliso zobuninzi ezifuneka kwiintsuku ezili-10-15, ngokunjalo ngokomthamo woku-odola.
Q4: Ngaba unawo nawuphi na umda we-MOQ?
A: Ayikho i-MOQ yamalungu aselangeni kunye nee-2000pc zeemveliso ezingezizo ezesitokhwe.
I-Q5: Ngaba ungamkela i-batch exubeneyo yeemveliso ezahlukeneyo?
A: Ewe, siyawuxhasa umxube wemveliso eyahlukeneyo, akukho mda wezinto ezingafunekiyo kunye neendlela zoomatshini, kunye nokucaciswa kombala, njl njl.
Q6: Uyithumela njani impahla kwaye ihlala ixesha elingakanani?
A: Sidla ngokuthumela nge-DHL, i-UPS, i-FedEx okanye i-TNT. Ihlala ithatha iintsuku ezingama-3-5 ukufika.
Sijonge phambili ekunikezeleni inkonzo yokumisa-nye ukuze songe ixesha, iindleko kunye namandla.
* Nceda unxibelelane nathi ngokukhululekileyo ukuba ukhona umbuzo.
* Sijonge phambili kwintsebenziswano elungileyo nani.
* Wamkelekile kwiHobbycarbon!
Iikhathalo zomkhiqizo : I-Standoffs ezenziwe ngokwezifiso > Ukuma kweenyawo zeAluminiyam
I-M3X6.3X3030mm eyenziwe yangumjikelo wecala le-aluminium spacer Qhagamshelana Ngoku
I-M3X6.3X15mm kumjikelo we-aluminium ojikelezayo wesiteyiti Qhagamshelana Ngoku
I-M3X6.3X20mm umbala obomvu ojikeleze inyathelo nge-aluminium Qhagamshelana Ngoku
I-M3X6.3X10mm umbala wombala wegolide wokujikeleza umjikelo wealuminium Qhagamshelana Ngoku
I-M3X6.3X10mm ijikeleze inyathelo lokuqina le-aluminium Qhagamshelana Ngoku
I-M3X6.3X15mm i-orenji engqiniweyo yomjikelo wokuma wedrone Qhagamshelana Ngoku
I-M3X6.3X20mm ibala eliluhlaza okwesibhakabhaka ukujikeleza kwinqanaba le-aluminium lime Qhagamshelana Ngoku
I-M3X6.3X25mm epinki etyhutyhile umjikelo wealuminium spacer Qhagamshelana Ngoku
Amanqwanqwa ebomvu ajikelezayo M3 Ukujikeleza okumiselweyo Inyathelo I-Aluminium Standoffs Amanqwanqwa eAluminiyam agciniweyo Amanqwanqwa eQonga aDumileyo okwenyani M3 Amanqwanqwa kumjikelo wokuma ngeenyawo I-M3 Amanqwanqwa eNtsimbi angenanto Imibala yesiqhelo ejikelezayo
Amanqwanqwa ebomvu ajikelezayo M3 Ukujikeleza okumiselweyo Inyathelo I-Aluminium Standoffs Amanqwanqwa eAluminiyam agciniweyo Amanqwanqwa eQonga aDumileyo okwenyani